I-Hydralazine HCL powder (304-20-1) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Hydralazine HCL powder
SKU: 304-20-1. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Hydralazine HCL powder (i-304-20-1), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Hydralazine HCL powder i-vasodilator esebenza ngokuphucula izihlunu kwimithambo yakho yegazi ukubanceda bahlaziye (bandise). Oku kunciphisa uxinzelelo lwegazi kwaye kuvumela igazi ukuba liqhubele phambili ngokulula kwimifuno yakho kunye nemithambo.
Hydralazine HCL powder Abalinganiswa basisiseko
Hydralazine hydrochloride powder ekusebenziseni
Amagama eBrama: Apresoline
Igama loGeneric: i-Hydralazine HCL powder (Ukubizwa: i-DRAL i-zeen)
Ukusetyenziswa kwePowder Hydralazine HCL
I-Hydralazine HCL powder isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi. I-Hydralazine hydrochloride powder kudidi lweemithi ezibizwa ngokuba yi-vasodilators. Isebenza ngokuphucula imithana yegazi ukuze igazi likwazi ukuhamba ngokulula ngomzimba.
Uxinzelelo oluphezulu lwegazi luyinto eqhelekileyo kwaye xa lungaphathwa, lunokulimaza ebuchosheni, entliziyweni, emithanjeni yegazi, kwiintso nakwamanye amalungu omzimba. Ukulimala kwezi ziko kungabangela isifo senhliziyo, ukuhlaselwa yintliziyo, ukungaphumeleli kwentliziyo, ukushaya isifo, ukungaphumeleli kwezintso, ukulahleka kombono kunye nezinye iingxaki. Ukongeza kokuthatha amachiza, ukwenza iinguqulelo zokuphila kuya kunceda ukulawula uxinzelelo lwegazi. Ezi zinguqu ziquka ukutya ukutya okuphantsi kweoli kunye netyuwa, ukugcina ubunzima obunempilo, ukusebenzisa ubuncinane imizuzu ye-30 ezininzi iintsuku, ukungabhema nokusetyenziswa kotywala ngokumodareyitha.
Iyiphi imilinganiselo ye Hydralazine hydrochloride powder
Qala unyango kwiqondo eliphantsi kwaye ukwanda kancane ngokusekelwe kumpendulo ngamnye wesigulane. Isiqhelo esiqhelekileyo sokuqalisa i-regimen ngu-10 mg ngamaxesha amane ngosuku nge-2 yokuqala kwiintsuku ze-4, ukwandisa kwi-25 mg kane ngeentsuku zonke kwiintsuku zokuqala.
Kwimizuzu yesibini neyelandelayo, ukwandisa umlinganiselo kwi-50 mg kane rhoqo imihla ngemihla (ukwandisa umthamo nge-10-25 mg / umthamo ngokuthe rhoqo kwiintsuku ze-2-5).
Umthamo omkhulu wemihla ngemihla osetyenziswa kwizifundo zonyango ngu-300 mg.
I-dose yokuqala yokuphatha ukuhluleka kwentliziyo yi-10 kwi-25 mg ngomlomo 3 kumaxesha e-4 imihla ngemihla.
Umtya oqhelekileyo ngu-225 ukuya kwi-300 mg imihla ngemihla kwi-3 kwi-4 iisadi ezihlukeneyo.
Ngokukhawuleza kweso sifo, i-0.5 mg / Kg IV nganye iiyure ze-4.
Indlela i-Hydralazine HCL iphambili ngayo
I-Hydralazine HCL powder isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi oluphezulu (uxinzelelo lwegazi). Isetyenziselwa ukulawula uxinzelelo lwegazi oluphezulu kumama ngexesha lokukhulelwa (pre-eclampsia okanye eclampsia) okanye kwiimeko ezingxamisekileyo xa uxinzelelo lwegazi luphezulu kakhulu (hypertensive crisis).
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu luyongeza kumthwalo wokusebenza kwentliziyo kunye nemithambo. Ukuba iqhubeka ixesha elide, intliziyo kunye nemithambo yegazi ayinakusebenza kakuhle. Oku kunakho imitha yegazi ye-damagethi yengqondo, intliziyo, kunye neentso, okubangelwa ukuphazamiseka, ukungaphumeleli kwentliziyo, okanye ukungaphumeleli kwezintso. Ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kunokunyusa umngcipheko wokuhlaselwa kwintliziyo kunye neentlungu.
I-Hydralazine hydrochloride powder isebenza ngokuphucula imithana yegazi kunye nokwandisa ukunikezelwa kwegazi kunye ne-oksijini entliziyweni ngelixa kunciphisa umthwalo walo msebenzi.
Akufanele usebenzise le mayeza ukuba unobungozi kwi-Hydralazine hydrochloride powder, okanye ukuba unesifo se-coronary disease, okanye isifo senhliziyo esishukumisayo esichaphazela i-mitral valve.
Ngaphambi kokuba uthathe i-Hydralazine HCL powder, xela ugqirha wakho ukuba unesifo sezintso, lupus, angina pectoris (intlungu yesifuba), okanye ukuba uke wabuhlungu.
Ngethuba uthabatha i-Hydralazine hydrochloride powder, thintela ukuvuka ngokukhawuleza ukusuka kwindawo ehleli okanye elala, okanye unokuziva udizzy. Vuka ngokukhawuleza kwaye uzinze ukuze ukhusele ukuwa.
Qhubeka usebenzisa i-Hydralazine HCL powder njengoko iyalathwayo, nokuba uziva kakuhle. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu kaninzi alukho iimpawu, ngoko awukwazi ukuba xa uxinzelelo lwegazi luphezulu. I-Youmay kufuneka usebenzise imishanguzo yegazi ngenxa yobomi bakho bonke.
Ingaba i-Hydralazine hydrochloride powder Ingaba nayiphi na imiphumo yangaphandle
ukukhawuleza okanye ukubetha intliziyo;
ukuvuvukala ebusweni bakho, isisu, izandla, okanye iinyawo;
ukugubha, ukutshisa, intlungu, okanye ukuziva;
uvakalelwa ngathi unako ukudlula;
ukudideka, iingcinga ezingaqhelekanga okanye ukuziphatha;
isikhumba esiluhlaza, ukululaza okulula;
ukuvuthwa okunzima okanye okunzima;
ukucima ngaphantsi kwexesha eliqhelekileyo okanye kungabi nhlobo; okanye
intlungu edibeneyo okanye ukuvuvukala ngentsholongwane, intlungu yesifuba, ubuthathaka okanye ukukhathala.
isicupunu, ukuhlanza, ukulahleka kwesidlo;
isifo sohudo, ukumbumba;
intlungu okanye intlungu;
iipumphu okanye iipumphu ephihliweyo; okanye
ukukhawuleza okanye ukukhwabanisa isikhumba.
Indlela yokuthenga i-Hydralazine HCL powder kwi-AASraw